Ko Ko Win ရဲ့ File Sharing — MYSTERY ZILLION
Ko Ko Win ရဲ့ File Sharing
October 2009 edited December 2009 in Sharing
Ultimate 100 Fonts pack တဲ့
ကဲ ဖောင့်တွေကို လိုချင်လှတဲ့ ဂရစ်ဖစ်သမားတွေ ဒီမှာယူကြပါကုန်.. နာမည်လေးကတော စိတ်၀င်စားစရာပဲဗျ.. သုံးကြည့်ကြဦးဗျို့... ရက်ပစ်ကဟာပဲ. အကုန်ဒေါင်းလို့ရအောင် ဆိုက်ဒ်ပေါင်းစုံတင်ပေးထားတယ်..:D:D
လာပြန်ပြီဗျ.. ဒီတစ်ခါ.. အင်စတော ဘလော့ခ်ခါဗျ.. Install Blocker ပါဗျာ.. ရက်ပစ်မရှိသူတွေ ဒီတစ်ခါတော့ အိုင်ဖိုင်ကပဲဒေါင်းတော့နော်.. ရှိသူတွေကတော့ ဒေါင်းကြပေါ့..
Install-Block allows you to requireapassword to be entered in order for new software to be installed on your computer.
An ideal solution for parents, employers, and teachers who seek to secure their PCs, Install-Block can protect you from software potentially harboring adware or spyware. The program can also return to you the productivity lost through the use of games (be it Solitaire or games on the web), instant messaging programs, MySpace, and other distractions. In addition, you can prevent harm to your computer by denying access to system tools and other Windows features. Virtually any program, individual window inside an application, or website can be restricted from use. When someone tries to accessafeature that the program administrator has chosen to block,apassword prompt is displayed, and without the password the user cannot continue.
Download Link တွေကို Code လေးပဲလုပ်ပြီး အပြည့်အစုံဖော်ပြလို့ရမလားမသိဘူး။
ကျွန်တော်က Link တွေကို Notepad နဲ့မှတ်ပြီး Con ကောင်းမှ IDM နဲ့ပြန်ဆွဲတာမလို့ အဲဒါလေးတစ်ချက်လောက်များ ကူညီနိူင်မလားဗျ။
OK! Challenger220 Here!
လာပြန်ပြီဗျ.. အခုတစ်လော စာမေးပွဲရှိလို့ အိမ်ကပ်နေရာကနေ စာကျက်ရင်း တစ်နေကုန် ကွန်ပြူတာဖွင့်ကာ ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ခြင်း၊ အက်ပ်လုပ်ဒ်တင်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေပါသည်.. အဆဲတော့ခံရတယ်ဗျ..အိမ်က.. ဟီး..
ကဲ.. ဒီဟာကတော့ Microsoft ရဲ့ Office 2007 ကို ဆိုင်မှာလည်း သွားမ၀ယ်ချင်. သွား၀ယ်ပြီးတော့လည်း crack တွေ ဖြည်ပြီးသုံးရမှာ အလုပ်ရှုပ်တယ်လို့ ခံယူနေသူတွေအတွက်... Microsoft Office 2007 Blue Edition Cracked လေးပါဗျာ.. တစ်နေကုန်တင်လိုက်ရတယ်.. 500MB ကျော်ပါတယ်ခင်ဗျာ.. Mediafire မှာတင်ထားတယ်ဗျ.. အောက်မှာ ယူတော်မူ..
Portable Almeza MultiSet Professional v7.0.150 Multilanguage
ကဲ နောက်တစ်မျိုးပေါ့ဗျာ.. ဘာသာမပြန်တတ်လို့ မပြန်တော့ဘူးဗျ.. ကိုယ့်ဟာကိုယ်သာ ဖတ်လိုက်ကြတော့နော်... :D
Quick reinstalling Windows without any data loss. Almeza MultiSet Professional automates installation of any version of Windows, complete with all the latest service packs, patches, and security updates. It installsapre-configured, ready-to-use operating system to all computers in your organization. Save weeks of monotonous work by installing and configuring all required applications completely unattended.
နောက်တစ်မျိုးပေါ့ဗျာ.. ဒါကတော့ ပီဒီအက်ဖ်ဖိုင်ကနေ ပါ၀ါပွိုင့်ကိုပြောင်းပေးတာတဲ့...
ကိုကို၀င်း ေ၇ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ ဒေါင်းနေပြီဗျို့ media fire ဆိုတော့ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့ဗျာ စောင့်နေတယ်ဗျို့နောက်ဟာတွေ
လောလောလတ်လတ် အသုံးတည့်တဲ့ဆော့ဖ်၀ဲလ်လေးတွေထဲမှာ Portable လေးတွေက ထိပ်ဆုံးကပေါ့ဗျာ.. အခုလည်းကြည့်ကြဦး..
ကျွန်တော်တို့ အခုလက်ရှိအထိ လက်မလွှတ်နိုင်သေးတဲ့ ဒေါင်းလုပ်ဒ်ဒါ ဆော့ဖ်၀ဲလ်လေးဗျ.. သူလည်း ပေါ့တေးဘဲပဲ..
Internet Download Manager 5.18 Build2Portable | 7.4 Mb
password : kokowin
ဦးလေးဘဂျီး ဦးကိုကိုဝင်း အနောတင်ပေးလိုက်ပြီနော်....:D:D:D
IDM 5.18.3 - THE LAST VERSION (CRACKED!)
ကို ကိုကို၀င်းရေ (ကိုကလဲများသဗျာ:):)) rar ဖိုင် 1 ၇ယ 8 ၇ယ် 11 ၇ယ်က error ပြနေတယ်ဗျ
3 ခါရှိသွားပြီ ပြန်စစ်ကြည့်ပေးပါ့လားဗျာ။အပြည်ပါမလာဘူးဖြစ်နေတယ်။connection error တော့3ခါလုံးဖိုင်အတူတူမှာအဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တာပဲ
စစ်ကြည့်ပေးပါ့မယ်ဗျာ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. အဲဒီ့နေ့က ကွန်သိပ်မကောင်းလို့ပြတ်သွားတယ်နဲ့တူတယ်.. ဘန်းကျော်ဆိုတော့ အဲဒီ့ဖိုင်လေးတွေကို တစ်နေကုန်တင်လိုက်ရတယ်ဗျာ.. အသုံး၀င်တဲ့သူ၊ ဆွဲတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတော့ ပျော်ပါတယ်.။ မဆွဲကြမှာပဲ စိုးရိမ်နေရတာ.. နောက်ရက်တွေလည်း စာမေးပွဲနားနီးနေပြီမို့ နားပြီးရင် တစ်ရက်တစ်ပို့စ်လောက်တော့ တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါ့မယ်.။ ဒါနဲ့ အကိုပြောတာ MS Office 2007 ကိုပြောတာနော်.. မနက်ဖြန်လောက်တော့ တင်နိုင်မယ်ထင်တယ်.. လောလောဆယ်တော့ ကွန်ကကျ အဟင့်..
YouTubeGet v5.2.3 Portable
YoutubeGet version provides easy work of downloading and converting videos from YouTube. Offeringamultitude of methods to acquire the video, this application has all the power you need while still remaining small and easy to use. After downloading videos it will auto convert FLV files to MP3, MP4, 3GP, AVI, WMV, MOV etc. Soon, you can see youtube videos on your iPod, iPhone, PSP or mobile phone!
ifile-it link လေးပြန်စစ်ပေးပါဦး ဒေါင်းလို့ရဘူး
ကို Challenger တင်ထားတဲ့ Xilisoft_Video_Converter_Ultimate_5.1.26.0904_3.rar ဆိုတဲ့ RS Link ကို 2shared မှာတင်ပေးထားတာလေးပါ..
အကိုရေ.. ပြန်တင်ပေးဖို့ရာ .rar ဖိုင် 1 က ၀င်းဒိုးချတဲ့အထဲပါသွားပြီး ကျန်ဖိုင်များသာကျန်ခဲ့ပါတယ်.. 8 ကိုတော့ ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်တာ မပြတ်ဘူးဗျ.. IDM နဲ့ ကြိုးစားကြည့်ပါဦး..
Google Earth Pro 5.0 with GPS Support – Pre-Cracked
အင်တာနက်ဆိုင်တွေ အတွက် အသုံး၀င်မယ်ထင်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ကျွန်တော်အွန်လိုင်းစသုံးတတ်ကာစက အဲဒါကို ဘယ်ကဒေါင်းရမှန်းတောင် မသိဘူးဗျ.. :P
Password : kokowin (only for 2shared)
Window XP USB Live Portable
ဒါလေးကတော့ Window XP မှ XP ဆိုသူတွေအတွက် သွားလေရာ အိတ်ထဲထည့်သွားနိုင်အောင်ပါ..
ရက်ပစ်က အော်ရီဂျင်တယ်ဖိုင်ကတော့ ရှာလို့မရတော့ဘူး.. သူ့လင့်ခ်က ဆယ်ခုတွေ့တောင် တစ်ခုမှ ဒေါင်းမရဘူး.. ရှာရှာဖွေဖွေ ဒေါင်းထားတာ.. အခုမတွေ့တော့လို့.. 4shared မှာပဲတင်ထားတာပဲ ယူလိုက်တော့.. :P
regular download က ဒေါင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေပါတယ်..
Cyberlink PowerDVD 8 Ultra (Pre-Activated)
ဒါကတော့ Cyberlink PowerDVD 8 Ultra (Pre-Activated) ဖြစ်ပါတယ်. 2shared မှာပဲ တင်လိုက်ပါတယ်..။ အခု သုံးကြည့်သမျှထဲမှာ. 2shared လေးမဆိုးဘူးလို့ထင်တယ်ဗျ. တင်ရတာ သိပ်ကဂျီကဂျောင်မကျဘူး.. ဆွဲတဲ့လူတွေရော အဆင်ပြေကြရဲ့လားမသိဘူး. ပြောပေးပါဦး..
ဇော်ဂျီကီးဘုတ်တွေက နောက်ပိုင်းဒေါင်းရ ခက်လာသလိုပဲ တခြားလူတွေတော့ မသိဘူး.. ကျွန်တော်တော့ အရင်ဟာလေးပဲ ကြိုက်တယ်..။ ကျွန်တော်နဲ့ အကြိုက်တူမယ့်သူတွေ ယူနိုင်ဖို့..
အင်တာနက်ဒေါင်းလုပ်ဒ် မန်နေဂျာရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း 5.18 build4ဖြစ်ပါတယ်..
Foxit Reader Pro v3.1.2.1013 Cracked-EAT
Foxit Reader is the only eligible alternative reader/viewer for PDF files (eBooks). ItвЂ™s free, smaller, faster, and cleaner. And it starts up immediately, so you donвЂ™t need to wait the annoying вЂњWelcomeвЂќ screen to disappear. Foxit PDF Reader is extremely easy to use, just double click it to start and then click open button to open your PDF document. If you want to print, click on вЂњPrintвЂќ button. If you want to setup the page layout for printing, select вЂњPrint SetupвЂќ from вЂњfileвЂќ menu. Foxit Reader supports Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista
ကျွန်တော်သုံးကြည့်တာတော့ တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျ.. သူက registry tools တွေလည်း ပါတယ်။ Internet temp ဖိုင်တွေလည်း ရှင်းပေးတယ်။ အကြိုက်ချင်းတူသူတွေ ယူကြပေါ့..
Mirc 6.35 Full Version လေးလိုချင်ပါတယ်
ရှိတဲ့ သူများ ရှဲကြပါ....:D
တိုကြီး တိုတို၀င်း:D...... သားကို လေ
Quick Time7pro - full version လေးရှာပေးပါလား.......:)
တိုကြီး မရလည်း တိုလေး တို့ ၊ MZ က လူတွေ အားလုံး ရှာပေးကြပါ...............:D
အထူးသဖြင့် ဒီ စာကို လာဖတ်မိတဲ့ သူတွေ .....ရှာပေးကြပါ....:P
lonelyman wrote: »
Mirc 6.35 က key မရှိလို့ဗျ....... 6.16 ကတော့ ကီးပါ ရှိတယ်...... လိုချင်ရင်
ယူလိုက်ဗျာ...... မလိုတော့လည်း ထားလိုက်ပါ.......